जेष्ठ २६, २०७४- खाडी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाल ‘मुछिन’ नहुने भन्दै कुनै पनि औपचारिक धारणा तत्काल बाहिर ल्याउन नहुने सुझाव त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई दिएका छन् । ‘यो सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य खाडी मुलुकहरुको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । अहिले हाम्रा नागरिकलाई कुनै भौतिक असुविधा तथा असुरक्षा छैन्’ खाडी स्थित नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्रलाई दिएको जानकारीमा उल्लेख छ, ‘गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) बीच यस्ता समस्या यसअघि पनि आएको र समाधान भएको उदाहारण छन् । त्यसैले हतारिन हुँदैन । हामी अध्ययनमा नै छौ । समस्या समाधान गर्न खाडी मुलुकहरूबीच आन्तरिक रूपमा निकै पहल भइरहेको छ ।’
खाडी मुलुकस्थित दुतावास स्रोतहरूका अनुसार जीसीसी मुलुकमा नेपाली, भारतीय, बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारी तथा व्यवसायीमा संलग्न छन् । कतारमा भारतीयपछि नेपालीको संख्या बढी छ । अहिले कतारमाथि नाकाबन्दी भएकाले त्यहाँमात्र समस्या हुन सक्छ । तर, अरू खाडी मुलुकमा समस्या छैन । ती खाडी मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारेमा त्यहाँको सरकार र एक आपसमा समेत छलफल गरिरहेका छन् । सोमबारदेखि नै उनीहरू कतारमाथि नाकाबन्दी सुरु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न आपसीमा छलफलमा छन् र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छ । ‘जीसीसीको आन्तरिक समस्याले तत्काल विदेशी नागरिकलाई त्यहाँ कुनै असर गर्दैन । खाद्यान्न संकट हुने जस्ता विषयमा सत्यता छैन । यो समस्या लम्बिने अवस्था देखिएको छैन । त्यो अवस्था आएमा मात्र हामीले सोच्नुपर्छ,’ खाडीमा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरुको बुझाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने । नेपाली दुतावासहरूले सम्भावित चुनौतीबारेमा खाडी मुलुकमा कामदार रहेका अन्य मुलुकसित छलफल भइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई पठाएका छन् ।
‘खाडी मुलुकहरुमा एकले अर्काप्रति गर्ने ब्यवहार र आत्म सम्मानमा अन्तर निहित यो समस्या आन्तरिक रुपमा नै समाधान हुनेछ,’ विज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले पठाएका छन । यो विषयमा तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराउने मुलुक सामेल हुनुहुदैन भन्दै विवादित मुलुकहरुबीचमै हुने संवादबाट यो समाधान हुने संकेत पाइएको दावी समेत नेपाली कूटनीतिज्ञहरुको छ । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं । मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार अघि बढेका छौ । कतार सरकार र कतारमा रहेका अरू मुलुकका राजदूतहरुसंग छलफलमा छौ’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले टेलिफोनमा भने, ‘कतार सरकारसँग मात्र होइन हामी दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतबीच पनि छलफल र सम्पर्कमा छौं ।’ कतारको अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई कुनै समस्या आएमा हामीले दूतावासको नम्बर विभिन्न माध्यमबाट सर्कुलर गरेका छौ । कुनै पनि समयमा फोन उठ्नेछ । यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको नेपालमा रहेका परिवारमा चिन्ता छाएको होला । खाडीमा यो भयो, त्यो भयो भनेर तर यहाँ अवस्था सामान्य छ । खाडी मुलुकहरुबीचको आन्तरिक विषय आपसमा छलफल गरी मिलाउने सम्भावना छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत खाडी मुलुकबीच उत्पन्न समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताइसकेको छ । कुवेत पनि जीसीसीको समस्या समाधानमा लागि रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा नै परिवर्तन भइसकेकाले यो समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको त्यहास्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरु बताउछन् । ‘त्यस क्षेत्रमा अधिकतम नेपालीहरु रोजगारीमा रहेकै कारण केही चिन्ता हुनु स्वभाविक हो, तर अहिले अतालिने अवस्था छैन । कतिपय नेपालीहरु त्यस क्षेत्रमा ब्यवसायीको रुपमा पनि रहेका छन । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुको विश्लेषण अनुसार सउदी र इरानको चेपुवामा अन्य मुलुक परेका हुन् । कतारको ग्यास उत्पादन कम्पनी इरानसंगको सहकार्यमा रहेकाले पनि यो समस्यालाई इरानसंग र सफ्ट पावरका रुपमा रहेको अलजजिरा टिभीसंग जोडेका छन्’ स्रोतले भने । स्रोतका अनुसार बाहिरि रुपमा कतारले आतंकबादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको भए पनि संचारको सफ्ट पावर उपयोग गरेको धारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । कतारी अमिरको अभिब्यक्तिसंग पनि जोडिएका विषयले गर्दा खाडी मुलुकहरू कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्नेछन् । यसअघि सन २०१४ मा पनि यस्तै समस्या आउँदा रियाध सम्झौता भएको थियो । तर, के सम्झौता भएको हो, अझै स्पष्ट छैन । अहिले पनि सहमति हुने सम्भावना भएकाले नेपाललगायत मुलुकहरु यसमा बोल्न हतारिनु हुदैन भन्ने विश्लेषण त्यहाँस्थित कूटनीतिज्ञहरूको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी स्थित सबै दूतावासहरुलाई त्यहाँको अवस्थाबारेमा जथाभावी नबोल्न र अवस्थाको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । असंलग्न आन्दोलनका अनुयायी नेपाल खाडी मुलुकहरू आन्तरिक मामिलामा बोल्न नहुने निर्देशनसमेत परराष्ट्रको छ । खास गरि साउदी अरबले कतार जीसीसीको अवधारणाभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । कतारमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै साउदीले खण्डन गर्दै आएको छ । साउदीले सीमा समेत सिल गरेर जीसीसी सदस्यहरु बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको साथ लिएको छ । जीसीसीका सदस्य राष्ट्र कुवेत र ओमान यसमा संलग्न छैनन् । कुवेतले मध्यस्तता गर्न खोजिरहेको छ । कतारले साउदी अरबसहितका मुलुकसँग भित्री रूपमा वार्तासमेत गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: जेष्ठ २६, २०७४
Posted by Canada Nepal at 16:23
क्रिकेटसंगको सहकार्य मनाउन कम्पनीद्वारा नयाँ टीभीसी पनि सार्वजनिक
२७ जेठ, काठमाडौं । क्यामेरा फोन ब्राण्ड ओप्पोले कालो रङ्मा एफथ्रीको नयाँ भर्जन सार्वजनिक गरेको छ । मध्यम बर्गीय बजार लक्षित कालो रङमा सार्वजनिक गरिएको एफथ्री ब्ल्याक भर्जनको मूल्य ३२ हजार ९ सय ९० निर्धारण गरिएको छ ।
कम्पनीले केही समय अगाडि ओप्पो एफथ्री प्लस पछि सार्वजनिक गरेको एफथ्री गोल्ड भर्जन, डुअल फ्रण्ट क्यामेरासहित गु्रफ सेल्फी पुस्ता लक्षित दोस्रो स्मार्टफोन हो ।
ओप्पो एफथ्रीमा डुअल फ्रण्ट क्यामेरा उपलब्ध छ । एकल सेल्फीका लागि फोनमा १६ मेगा पिक्सेल र गु्रप -सामूहिक) सेल्फीका लागि वाइड एङ्गल लेन्ससहितको क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार उत्पादन उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै ब्राण्डले उपभोक्ता, विशेषगरी युवा पुस्तासंग आफ्नो सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहेको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार एफथ्रीको ब्ल्याक भर्जन नेपाली बजारमा जेठ २७ देखि प्रमुख मोबाइल बिक्रि केन्द्रहरु मार्फत बजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
‘उपभोक्ता मागको सुनुवाइ गर्दै तिनको आवश्यकता अनुरुप उत्पादन उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो’ ओप्पो एफथ्रीको ब्ल्याक भर्जन सार्वजनिक गर्दै ओप्पो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनी जीले भने-‘नेपाल प्रवेश गर्दा देखिनै हाम्रा उपभोक्ता, तिनमा पनि विशेषगरी युवा पुस्ताले फोनमा रङ्को विकल्प माग गर्दै आइरहेका थिए । कालो रङ्ले स्टाइल र आत्मविश्वासको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । नयाँ एफथ्री मार्फत हामी उपभोक्तालाई नयाँ स्टाइल स्टेटमेण्ट स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्न चाहान्छौँ ।’
नेपालमा पनि क्रिकेट प्रति कम्पनीको मायाँ दर्साउने सोचका साथ कम्पनीले खेलसंग सम्बन्धित नयाँ टीभीसी सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७४ जेठ २६ गते १९:०२ मा प्रकाशित
Posted by Canada Nepal at 16:20
काठमाडौं : नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका चिनियाँ रक्षामन्त्री च्याङ वानग्वाइन र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीबीच शुक्राबर सैनिक मूख्यालय जंगीअड्डा, भद्रकालीमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीचको लामो सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । चिनियाँ रक्षा मन्त्री स्तरको भ्रमण भने १६ वर्ष पछि जुरेको हो ।
भेटअघि, चिनियाँ रक्षा मन्त्री च्याङले सैनिक मञ्चस्थित वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनालाई अत्याधुनिक हातहतियारका साथै सैन्य सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसअघि चीनले नेपाली सेनालाई ८४ करोड मूल्य बराबरको विभिन्न सैन्य समाग्री उपलब्ध गराएको थियो । गएको निर्वाचनको बेलामा पनि चीनले सहयोग गरेको थियो ।
प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि एक वर्ष अघि चिन भ्रमण गरेका थिए ।
Posted by Canada Nepal at 01:56
चीनले शान्ति सेना र विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ ।
बिहीबार मात्र नेपालको तीन दिने भ्रमणका आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानले नेपाली समकक्षी बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर सहयोगको बचन दिएका हुन् ।
रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङले शान्ति सेनाका साथै विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणका काम गर्दा आवश्यक पर्ने हेभी इक्विपमेन्टहरु उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । ‘हामीले लिस्ट लिएपछि उनीहरुले उपलब्ध गराउनुहुन्छ,’ भेटपछि रक्षामन्त्री खाँडले भने ।
उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बेइजिङमा हुने भेटवार्तामा पनि सैन्य सहयोयबारे थप छलफल हुनेछ ।
Posted by Canada Nepal at 04:40
कञ्चनपुर, पुनर्बासका गोविन्द गौतम भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मारिए । उनको हत्या भारतीय सुरक्षा निकायबाटै भएको हो । यो शोकबाट कञ्चनपुर विस्तारै तंग्रिदैँछ ।
सरकारले गौतमलाई ११ तोपको सलामीसहित राजकीय सम्मान दिएको छ । सहिद घोषणासँगै १० लाख रुपैयाँ पनि दिने घोषणा गरेको छ ।
तर, ७० वर्षीय बुबा, आमा, पत्नी र तीन छोरी भने अहिले पनि उही अभाव र शोकमा छन् । राज्य अहिलेसम्म गौतमको घरमा पुगेको छैन । ७० वर्षीय बाबु भीमलाल छोराको किरियामा बसेका छन् तर छोराको किरिया खर्चसमेत छैन गौतम परिवारसँग । एबिसी न्युज टेलिभिजनका पत्रकार डण्ड गुरुङले फेसबुकमा लेख्नु भएको छः गौतमको परिवार किरिया खर्चसमेत अभावमा पिल्सिइरहेको छ ।’
गौतमको परिवारलाई सहयोग गर्ने भनेर विभिन्न देशमा रकम संकलन सुरु भए पनि गौतमको परिवार भने किरिया खर्च अभावमा रहेको हो । तस्बिरः डण्ड गुरुङको फेसबुकबाट ।
Posted by Canada Nepal at 02:31
पशुपति र स्वयम्भू मन्दिर वरपर बस्ने ९७ प्रतिशत बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी-एड्सको संक्रमण भएको पाइएको छ। केही समयअघि अमेरिकाको वासिङ्टन विश्वविद्यालयले पशुपति र स्वयम्भूका ३९ बाँदरमा गरेको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ। -३९ मध्ये ३७ बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी-एड्सको संक्रमण देखिएको थियो। विश्वविद्यालयले पहिलो समूहमा १२, दोस्रोमा ११ र तेस्रोमा १६ बाँदरमा अध्ययन गरेको थियो। जसअनुसार १७ भाले र २२ पोथी बाँदर थिए।
अनुसन्धानकर्तालाई उद्धृत गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपाल बाँदरको टोकाइबाट लाग्ने क्यान्सर र एचआइभी-एड्सको उच्च जोखिममा छ। -‘नेपालको पशुपति र स्वयम्भूका बाँदर मान्छेदेखि डराउँदैनन्। उल्टै मानिसलाई आक्रमण गर्न आउँछन्। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई चिथोर्यो‍ वा उसको शरीरमा भएको रगत मानिसमा सर्यो‍ भने कुनै न कुनै समयमा त्यस्तो मानिसमा क्यान्सर, एचआइभी-एड्सलगायतका अन्य रोग सर्न सक्छ,’ अनुसन्धानकर्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. पुनले भने। नयाँ भाइरसको जोखिम कुनै पनि पशुले टोकेमा वा बाँदरले चिथोरेमा टिटानसको सुई लगाउने गरिन्छ। रेबिजको सुई लगाउने पनि गरेको पाइन्छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा नेपालका बाँदरमा योभन्दा पनि भिन्न प्रकारको उच्च जोखिम भएको भाइरस फेला परेको डा. पुनले बताए।
हेर्पेस बी भाइरस : यो भाइरसले इन्सेफ्लाइटिसको जोखिम अत्यधिक हुन्छ। यसको मृत्युदर मानिसमा ६० प्रतिशतसम्म भएको देखिएको छ। सिमिनियम ४० भाइरस : बाँदरको पिसाबमा अत्यधिक पाइने भाइरस हो यो। ३९ मध्ये ३५ बाँदरमा सिमिनियम ४० भाइरस पाइएको थियो। यही भाइरसले क्यान्सर लाग्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ। सिमिनियम फोमिग भाइरस : यो भाइरस बाँदरले टोक्दा लाग्ने र्या‍ल वा चिथोर्दा सर्ने गर्दछ। यो भाइरस क्यान्सर र एचआइभी-एड्ससँग सम्बन्धित रहेको र नेपाली बाँदरमा ९७ प्रतिशत देखिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यो गम्भीर समस्या हो। सिमिन इमुनोदिफिसिन्सी भाइरस : यो पनि बाँदरले टोक्दा वा बाँदरको रगतबाट सर्ने गर्दछ। मानिसमा देखिँदै आएको एड्स पनि यही भाइरसको परिस्कृत रूप मानिन्छ। रेबिज भाइरस : यो भाइरस पनि नेपाली बाँदरमा देखिएको छ। तर, हालसम्म मृत्यु भएको तथ्यांक छैन।
त्यसैले रेबिजविरुद्धको खोप दिने गरिएको छैन। ‘हुँदै नहुने भन्ने होइन, एकैपटक धेरै मानिसलाई टोकेको अवस्थामा खोप दिनुपर्ने हुन्छ,’ डा. पुनले भने। सहरका बाँदरबाट बढी समस्या डा. पुनले गाउँका भन्दा सहरका बाँदरबाट बढी समस्या देखिएको बताए। अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेमध्ये सबैजसो पशुपति र स्वम्यभूका बाँदरले टोकेका मानिस रहेको उनले बताए। यस्ता बाँदरले टोकेकोमा मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। ‘मन्दिरका बाँदरहरू धेरै छुच्चा हुन्छन्। उनीहरूले जुनसुकै समयमा बाटोमा हिँडिरहेका मानिसलाई टोक्न सक्छन्। यस्ता बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी-एड्सको भाइरस रहेको पाइयो। त्यसैले बाँदरसँग जिस्कने र खानेकुरा दिनबाट टाढै बस्नुपर्छ,’ डा. पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने। शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक पाँचजना बिरामी बाँदरले टोकेका पाँचजना बिरामी दैनिक टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश स्वयम्भू र पशुपतिका बाँदरले टोकेका रहेको डा. पुनले बताए।
बाँदरको टोकाइबाट हुने यस्तो रोगबारे कसैलाई जानकारी थिएन। हामीले पनि बिरामी आउँदा रेबिजको मात्र सुई लगाउने गरेका छौँ। तर, यो अनुसन्धानले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने। तत्काल असर नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले असर गर्ने उनको भनाइ छ। बाँदर र मानिसमा उस्तै रोग : वन्यजन्तुविज्ञ वन्यजन्तुविज्ञ डा. मुकेशकुमार चालिसेले बाँदर र मानिसमा उस्तै रोग हुने गरेको बताए। ‘पशुपति र स्वम्यभूका बाँदर एकै प्रकारका हुन्। पशुपति र स्वयम्भूमा गरी नौ सयको संख्यामा बाँदर छन्। आहारको हिसाबले त्यो अत्यन्तै धेरै संख्या हो।‘
यसको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने। ५० बाँदरको क्षमता भएको पशुपति र स्वयम्भूमा नौ सय बाँदर हुँदा आहारको अभावमा उनीहरूले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गरेको र त्यसबाट मानिसमा रोग सर्ने जोखिम रहेको उनले बताए। ‘मानिसमा जस्तै बाँदरलाई पनि जुका पर्ने, शरीरका विभिन्न भागमा दाद देखिने, ज्वरो आउने, निमोनिया हुने, झाडापखाला लाग्ने, क्यान्सर हुने, एचआइभी-एड्सको संक्रमण हुने गर्दछ,’ डा. चालिसेले भने, ‘धनुष्टंकार बाँदरमा पनि हुन्छ, यसले बाँदरलाई कुनै असर गर्दैन, तर बाँदरबाट मानिसमा सर्न गएमा केही समयमै मानिसको मृत्यु हुन्छ।’
यसरी गरिएको थियो अनुसन्धान पशुपति र स्वयम्भूमा छुट्टाछुट्टै बसेका बाँदरलाई समातेर परीक्षण गरिएको थियो। खानेकुरा दिँदा आउने भएका कारण पनि मन्दिर आसपासका बाँदरमा अनुसन्धान गर्न सहज भएको थियो। बाँदरको पिसाब, रगत, र्या‍ल परीक्षण गरिएको डा. पुनले जानकारी दिए। सो परीक्षणपछि मात्र बाँदरको टोकाइबाट क्यान्सर र एचआइभी-एड्सको जोखिम हुने पत्ता लागेको हो। नेपालका बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी÷एड्सको भाइरस रहेकाले सचेत बन्न वासिङ्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सचेत गराएको पुनले बताए।
Posted by Canada Nepal at 03:11
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोलीबाट गत मृत्यु भएका पुनर्बासका गोविन्द गौतमको आज राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । उहाँलाई ११ तोपको सलामी सहित अन्तेष्टि गरिनेछ । सेती अञ्चलअस्पताल धनगढीमा रहेको शव नगर परिक्रमा गराउँदै अन्तेष्टिका लागि कञ्चनपुर लगिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने भएपछि उनको अन्त्येष्टि आज गर्ने स्थानीयले जनाएका छन् ।
उहाँलाई सहिद घोषणा गर्दै सरकारले ११ तोपको सलामी दिने निर्णय गरेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो । गत बिहीबार सीमानजिक बनाइएको कल्भर्ट विवादमा भारतीय फौजले गोली चलाउँदा उहाँको मृत्यु भएको थियो । उहाँको शव सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीमा राखिएको छ ।
आज बिहान ८ बजेबाट शवयात्रा गरिने स्थानीयले जनाएका छन् । अत्येष्टिका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री या मन्त्री आउनुपर्ने र राष्ट्रियताको विषय भएकाले राहत रकमसमेत बढाउनुपर्ने माग स्थानियको माग छ । शवयात्रा दोधा नदीमा पुगेर टुंगिनेछ । नदी–किनारमा सरकारी सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
वास्तवमा यी यस्ता वीर योध्दा हुन जसले इतिहासमा भक्ती थापालाई एकपटक पुन सम्झाएका छन् । आफुनो मातृभूमिको रक्षार्थ हाँसीहाँसी गोली थाप्न तयार यी योध्दालाई अन्तिम समयमा आएर सरकारले जुन इज्जत र सम्मान दिएर राजकिय सम्मानका साथ अन्तेष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसलाई आम नेपालीले स्वागत गरिरहेका छन् ।
Posted by Canada Nepal at 20:01
२६ फागुन, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवी)ले घरघरमा पसेर धम्याउन थालेको छ । सीमा क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माणको कारण देखाउँदै एसएसबीले हतियारसहित नेपाल भित्रिएर धम्याउन थालेको हो ।
हतियारसहित आएको एसएसबीको समूहले बुधबार राति आनन्दबजारका सर्वसाधारणलाई गालीगलौज गर्दै घर छाड्न धम्की दिएको स्थानीय बताएका छन् ।
एसएसबीले नेपाल प्रहरीकै सामुन्ने नेपाली पत्रकार हेमन्त न्यौपानेलाई फोटो खिचेको आरोपमा घाँटी समाएर फोटो डिलिट गर्न लगाएको छ ।
कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रमणी गैरेलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै भारती भूमिामा भेटे कुट्ने धम्कीसमेत दिएको गैरे बताउछन् ।
नेपाली बजरमा आएर हतियार उठाउँदा समेत नेपाली प्रशासन मौन रहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोशित बनेका छन् । बुधबार राति भारतीय एसएसबीले नेपाली सर्वसाधारणमाथि लाठीचार्ज समेत गरेको छ ।
घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक रोशन चन्द यसबारे सशस्त्र प्रहरीले जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै पन्छिए ।
करिब एक घण्टापछि घटनास्थल पुगेका सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक रामबहादुर खत्रीले समस्या जटिल भएकाले जिल्लाबाट नै सामाधान खोजिनुपर्ने बताए । (यसअघिको समाचारमा कञ्चनपुरको आनन्द बजार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।)
Posted by Canada Nepal at 23:12
Posted by Canada Nepal at 00:47
राष्ट्रपति भण्डारी विश्वका १५ महिला राजनेताको सूचिमा
काठमाडौं— राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विश्वका १५ सरकार तथा राज्यप्रमुख महिलाको सूचिमा परेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था आजान्स फ्रान्स प्रेस (एएफपी) ले महिला दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ग्राफमा जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केल, वेलायती प्रधानमन्त्री तेरेसा मे, नर्वेकी प्रधानमन्त्री इर्ना सेल्बर्गसँगै उनको नाम परेको हो।
एएफपीले महिला दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ग्राफमा जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केल, वेलायती प्रधानमन्त्री तेरेसा मेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको नाम समावेश गरेको छ।
एएफपीले बुधबार विश्वभरिका महिला सरकार तथा राज्य प्रमुखको ग्राफ सार्वजनिक गरेको हो। कोरियाली राष्ट्रपति पार्क ज्युन हाईविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया सुरु भएकाले डिसेम्बर ९ देखि उनी जिम्मेवारीमा छैनन्। उनी पदमा बहाल रहेकी भए विश्वले १६ जना महिला राजनेता पाउने थियो।
विश्वभरि बुधबार महिला दिवस मनाइँदैछ। यो अवसर पारेर विभिन्न क्षेत्रका अग्रणि महिलाको सूचि सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा एएफपीले महिला राजनेताको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति हुन्। उनलाई व्यवस्थापिका-संसदले निर्वाचित गरेको हो।
Posted by Canada Nepal at 00:44
काठमाडौं – नेत्र विप्लव चन्दको माओवादीले आव्हान गरेको आजको बन्द सफल पार्न एकाबिहानै सडकमा उत्रिएका विप्लवका ५१ कार्यकर्ता एकाबिहानै पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौँ, र ललितपुरका चोक–चोकमा निस्केर सडक अवरुद्ध गर्न खाजेका बन्दकर्तालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रधुम्न कार्कीका अनुसार पूर्वघोषित ‘नेपाल बन्द’ सफल पार्न भन्दै हिँडेका नेकपा माओवादी काठमाडौं जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष किरण भनिने सुर्य भुजेल र जिल्ला सदस्य विशाल लामा सहित सन्दिप तामाङ, साधु चौरसिया, संकल खड्का, सुवास नगरकोटी, उपेन्द्र तामाङ, प्रसन्न आलेमगर, पदम बहादुर सुनुवार, धन बहादुर तामाङ, अनुप तामाङ, निरज गुरुङ, सम्भु थापा मगर, विकास थापामगर लगायत ५१ जना रहेका छन् ।
Posted by Canada Nepal at 19:28
मकालु एयरको जहाज हुम्लामा दुर्घटनास्’अवतरण गर्ने क्रममा दाहिने टायर पन्चर,जहाजमा सामान्य क्षति’
हुम्ला । मकालु एयरको जहाज हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको छ ।
सुर्खेतबाट सामान लिएर गएको नाइन एन एजेजी कल साइनको जहाज सिमकोट विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा शुक्रबार बिहान पौने ८ बजे दुर्घटनामा परेको हो । दाहिने टायर पन्चर हुँदा भएको दुर्घटनाबाट जहाजमा सामान्य क्षति पुगेको र मानवीय क्षति भने नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
Posted by Shankar Pandit at 20:55
डिभी खारेज गर्दे ट्रम्प !
कात्तिक – २५ । आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरुमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्ने छ ।
त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरु पनि कटौती गर्न सक्छ ।
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरुले तिरस्कार गर्दे आएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने डिभीको कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ ।
२०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभले डिभिी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर डेमोक्र्याट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवासरहका सदस्यकोे भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कांग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
Posted by Canada Nepal at 18:38
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बुधबार सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी सिंगापुर हुँदै भारत भ्रमणमा जाने छन् ।
बुधबार सिंगापुर उड्नु अघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शाहलाई समर्थकहरुले फूलमालासहित विदाइ गरे । शाहका साथमा निजी सचिव सागर तिमल्सिना छन् ।
केही दिन सिंगापुर बसेपछि शाह बुहारी हिमानीसहित भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । हिमानी भने केही दिन पहिले नै सिंगापुर गाइसकेकी छिन् ।
दशै लगत्तै शाहका निजी सचिव तिमल्सिनाले नयाँदिल्ली पुगेर भ्रमणको मिति तय गरेका थिए ।
Posted by Shankar Pandit at 00:34
काठमाडौं । चुनावी सर्वेक्षणलाई गलत सावित गर्दै अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड जोन ट्रम्प विजयी भएका छन् ।
बुधबार भएको अन्तिम परिणामअनुसार डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी रोदम क्लिन्टनलाई हराउँदै ट्रम्प विजयी भएका हुन् । ट्रम्पले २७६ र हिलारीले २१८ इलेक्ट्रोरल मत पाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिमा जितका लागि कुल ५ सय ३८ इलेक्ट्रोरल मतमध्ये बहुमत संख्या अर्थात् २ सय ७० मत आवश्यक थियो । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन जितेपछि ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताए ।
Posted by Shankar Pandit at 00:26
तरकारीवालीु कुसुमलाई फिल्म खेल्न अफरै अफर
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा तरकारीवालीको नामबाट भाईरल बनेकी गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठ पछिल्लो समयकी हटकेक हुन् । नेपाल मात्र नभई विश्वव्यापी रु...
एक दिनमा कति जनाले फेसबुक चलाउँछन् ? जानौँ फेसबुक बारेका नयाँ तथ्यहरु
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया वेबसाइट फेसबुक दिनहुँ कति मानिसले चलाउँछन् होला रु फेसबुकको कमाइ कति छ होला ? यो सायद चासोको व...
घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पक्षमा बोलिदिने आफ्नै कार्यकर्ता पनि भएनन्
काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्वमा सकारका गठन भएको एक सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौतर्फी घेर...
तपाईको छाला फुस्रो छ ? उपनाउनुस् यी ४ टिप्स
काठमाडौं । ब्युटिसियन एलिसा लेप्चा, जाडोमा अधिकांशको समस्या हुन्छ, छाला फुस्रो हुने । तुलनात्मक रूपमा सुक्खा छाला भएकालाई जाडोमा यो समस्याल...
Gold my tv